Ubhashiye nencwadi yothando echiphizisa izinyembezi eKapa uKolisi - Impempe
Ubhashiye nencwadi yothando echiphizisa izinyembezi eKapa uKolisi
February 16, 2021 Impempe.com
Uyohlale njalo amukelekile kubantu baseKapa nakukona konke okuthinta umbhoxo ngaphansi kweWestern Province Rugby Union ukaputeni wamaBhokobhoko uSiya Kolisi obhale incwadi okusobala ukuthi uyisonge esemanzi yizinyembezi.
UKolisi ubhale le ncwadi kulandela ukugqabuka kwefindo lomshado weminyaka engaphezulu kweyishumi ebeliphakathi kwakhe neqembu leWestern Province.
Kule ncwadi ebinesihloko esithi IMINYAKA ENGU-11: IZIBUSISO EZIYOHLALA NAMI IMPILO YAMI YONKE, uKolisi ubonga iWestern Province, abalandeli, bonke abaqeqeshi asebenze nabo kanjalo nabadlali ababe nesandla ekukhuleni kwakhe embhoxweni nasempilweni.
“Ngiyohlale njalo nginikweleta ngethuba enangivulela lona ningaphoqiwe kodwa ngagcina sengiphiila impilo engangiphupha ngayo.
“Enikwenzile kuvuse okuthile kuzona zonke izingane zaseNingizimu Afrika ngoba zibona ngami ukuthi amaphupho ayafezeka. Angikholwa wukuthi niyaqonda ukuthi lokhu enikwenze kimi kunamandla kangakanani esizweni sonke,” ubhale kanje uKolisi.
Kule ncwadi uKolisi ubale ngamagama oRassie Erasmus, Allister Coetzee, Robbie Fleck noJohn Dobson kubaqeqeshi kanti kozakwabo ubale oJean de Villiers, Schalk Burger, Bryan Habana, Andries Bekker, Juan de Jong noGio Aplon.
“Kungenza ngiziqhenye ukuthi ngike ngaba senkundleni nabadlali abanamagama afana nalawa. Isithombe sami noBurger esagcina sidume umhlaba wonke ngimcela angisayinele ephepheni sithathwe ngifunda uibanga lesoshiyabalombili (Geade 8) kodwa namuhla ngijabule futhi ngiyathobeka ukuthi ngingasho kugcwale umlomo ukuthi ngidlale naye (uBurger).”
Akazange abashiye ngaphandle abalandeli uKolisi ebancoma ngokumfaka umfutho ngaso sonke isikhathi okwenze wagcina ekholwa ukuthi ayikho inkundla emhlabeni okungcono ukudlala kuyona umbhoxo ngaphandle kwaseNewlands Stadium, eKapa.
“Kuyohlale kusekhaya eKapa kodwa sesifikile isikhathi sokuthi lo mfana waselokishini andizele phezulu abheke engxenye kwazise naleli zwe lethu lihle kuwona wonke amakhona,” kuqhuba le ncwadi.
Angamenyezelwa noma nini njengomdlali omusha weSharks uKolisi kwazise leli qembu linezikhulu ezintsha okukhona kuzona noVincent Mai owaba nesandla ekutheni uKolisi athole umfundaze eGrey College.
Usesigungwini sezikhulu zeMVM Holdings esanda kuthenga amasheya kwiSharks. IMVM Holdings ixhumene neRoc Nation kaJay Z (wodumo lweHip Hop) kwazise iyona ebheke izindaba zikaKolisi.
Email: mthokozisi@impempe.com – Twitter: @MthokozMncuseni
AmaBhokoBhoko, i-Currie Cup, Ibhola lombhoxo
Previous Previous post: Usuthu luzimisele ngokuyishaya iChiefs koweDStv Premiership
Next Next post: ObekwiTeam of Choice uchaza ngokujoyina iTS Galaxy